Ụdị ọrịa shuga 1dị 1 na ọrịa nje na-efe efe nke nwata adịghị ejikọta, ihe ngosi ọmụmụ - Ụwa 2022
Ụdị ọrịa shuga 1dị 1 na ọrịa nje na-efe efe nke nwata adịghị ejikọta, ihe ngosi ọmụmụ
Enweghị ezigbo ihe kpatara ụmụaka ji arịa ọrịa shuga 1dị 1, ọrịa ebe usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na-awakpo mkpụrụ ndụ ndị na-emepụta insulin na mberede na-eme ka ha rịa ọrịa shuga.
Iji kpochapụ otu ihe kpatara gburugburu ebe obibi na ndepụta ahụ, njikọ aka US na European consortium elelewo ohere nke nje na-akpalite ụfọdụ mkpụrụ ndụ ihe nketa amaralarị na-ebute ọrịa shuga na ụmụaka.
Ndị nyocha ahụ nyochara ụmụ ọhụrụ 420,000 bụ ndị na-erubeghị ọnwa 4.5 n'etiti 2004 na 2010 maka akara mkpụrụ ndụ ihe nketa mara na-ebute ụmụaka ịmalite ịmalite ụdị ọrịa shuga 1. A gwara ezinaụlọ ka ha nye nkọwa zuru ezu gbasara ọrịa ụmụaka, nri, na data ntolite na mbọ iji weda ihe gbasara gburugburu ebe obibi nke nwere ike ịmalite ụdị ọrịa shuga 1 n'ime ụmụaka.
N'ime otu mbụ, ụmụaka 8.677 debanyere aha na ọmụmụ ihe na 932 n'ime ụmụaka nwere nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ nwanne nke ụdị ọrịa shuga 1 metụtara na ndị ọzọ enweghị akụkọ ihe mere eme ezinụlọ. Ndị nne na nna na-ebute ụmụaka ahụ n'ụlọ ọgwụ kwa ọnwa atọ maka nyocha ọbara ruo mgbe nwatakịrị ahụ dị afọ anọ iji chọpụta ihe nrịbama nke beta cell autoimmunity (antibodies against islet cell antigens), ma ọ bụrụ na nwa ahụ bu nje virus na ihe ndị ọzọ.
N'ime ụmụaka 8, 677 debanyere aha, 355 mepụtara ọgwụ mgbochi megide islet cell antigens na ụmụaka 86 nọ n'ìgwè ahụ nwere ọganihu ịrịa ọrịa shuga 1 site na July 2011. Oge site na ịchọta ọgwụ mgbochi autoimmune ruo mmalite nke ọrịa shuga dị ngwa ngwa, n'ime ọnwa isii, na 24. nke ụmụaka.
Ndị ọrụ nyocha nyochaziri nlele ọbara nke ewepụtara tupu na mgbe achọpụtara ọgwụ mgbochi autoimmune ma chọpụta na ọ nweghị nje virus na-eji teknụzụ usoro usoro ọgbara ọhụrụ. Teknụzụ a ga-ahụ ọ bụghị naanị nje a maara, mana nje niile n'agbanyeghị ihe ọmụma ya na sayensị.
"Nchọpụta ndị a enweghị ike iwepụ ohere ahụ na a na-enweta nje na-akpata ọrịa tupu ọnwa 6 na-anọghị ma ọ bụ na-anọ naanị obere oge na plasma n'ime ọnwa ndị na-eduga n'ọdịdị nke beta-cell autoantibodies na ọganihu na-arịa ọrịa shuga. Otú ọ dị, nchoputa na-eme ka anyị tụgharịa ọzọ ma nje na-ebute ụdị ọrịa shuga 1, "Prọfesọ Anette-Gabriele Ziegler nke German Research Center for Environmental Health na Munich kwuru.
E bipụtara nchọpụta ahụ na Diabetologia, akwụkwọ akụkọ nke European Association for Study of Diabetes (EASD) na enwere ike ịgụ ya ebe a (PDF).